IOS sy mpilalao Android dia hiaraka ao amin'ny Minecraft | Vaovao IPhone
Mojang, ny orinasa novolavola avy Minecraft: Pocket Edition ary an'ny Microsoft ho an'ny Android, iOS ary Windows 10, amin'ny fanavaozana farany azy, hamela ireo mpilalao hizara an'izao tontolo izao izay ialany na inona na inona sehatra misy azy ireo. Miaraka amin'ny kinova 0.12.11 an'ny Minecraft: Pocket Edition Tonga io fahafaha-manao mahaliana io izay hahafahantsika miala voly amin'ity lalao video mahafinaritra ity miaraka amin'ireo namantsika, na inona na inona rindrambaiko sy safidin'ny fitaovana misy azy tsirairay, na dia mamela ny mifanentana amin'ny Windows 10 Mobile aza ianao.
Ilaina tsotra izao ny miditra amin'ny iray amin'ireo tontolo vaovao na izay misy, ny tsirairay dia afaka mandray anjara na Android na iOS, raha toa ka tsy maintsy mihaona izy ireo amin'ny tambajotra iray ihanyMba hamoahana ny safidin'ny lalao tambajotra eo an-toerana, ny ambiny izay te hiditra dia hanindry ny safidy "milalao" ary afaka mandray anjara izy ireo.
Ny olana angamba dia hoe na iza na iza mamorona izao tontolo izao ampiana ny hafa ao anaty tambajotra eo an-toerana dia tapitra ho an'ny mpilalao rehetra ny lalao. Etsy ankilany, afaka mandray anjara amin'ny lalao iray ihany izy ireo mpilalao hatramin'ny dimy amin'ny fotoana iray. Ao amin'ny Windows 10 dia miasa kely izy io, satria tsy maintsy ampandehonao ny «Multiplayer Local Server» fiasa hahafahanao mandray anjara amin'ity maodin-dalao ity.
Azo antoka fa hahafinaritra tokoa milalao miaraka amin'ny namanao ao an-trano Minecraft: Pocket Edition izay ahafahan'ny namanao mampiasa ny fitaovana ananany, na fitaovana misy Windows 10 toy ny Surface, fitaovana iOS toa ny iPad Pro vaovao ary mazava ho azy fa misy amin'ireo fitaovana mifanentana maro izay ny rafi-piasan'izy ireo dia Android. Aza misalasala manavao Minecraft: Pocket Edition hahafahanao mankafy an'io fiasa io amin'ny namanao izay afaka mitondra fahafinaretana mandritra ny ora maro ho anao. Ary raha mbola tsy manana an'ity lalao video mahafinaritra ity ianao, dia angamba fotoana mety ahazoanao azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » IOS sy mpilalao Android dia hiaraka ao amin'ny Minecraft
iPhone 6s vs. iPhone 6: Inona no niova?
IPhone 6 napetraka ho an'ny $ 12 latsaka